Ndiyo nguva yekudyara muchikamu chekuvaka? | Ehupfumi Zvemari
Ndiyo nguva yekudyara muchikamu chekuvaka?
Chikamu chekuvaka muSpain ndechimwe chesimba muhupfumi hweSpain. Kusvikira pakuve nehukama hwepedyo nekukwira uko iyo Gross Domestic Chigadzirwa (GDP) inogona kusangana uye kuti nepo ichive pamatanho ari padyo ne3% unogona kuve mukana wekutora zvinzvimbo mumitengo kubva kuchikamu chakakosha chebhizinesi ichi. . Iine mukana wakawedzerwa uyo wekuti maSpanish equities ane kupihwa kwakasiyana-siyana. Nemakambani kubva kumaraini ebhizinesi akasiyana se Acciona kana ACS, kududza mienzaniso mishoma.
Kana kukura kwehupfumi hweSpain kuri chokwadi mukati megore rino ratichangotanga, ichave nguva yekuti iwe ufunge nezve kuvhura nzvimbo mune mamwe emashambadziro emusika wemasheya aripo mu mari yemari. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti ivo vanenge vaine kukoshesa kwakakwirira kugona kupfuura mune mamwe matunhu emakambani. Nemikana yebhizinesi iyo inogona kuve inonakidza kwazvo kuitira kuti iwe ugone kuita yako mari inobatsira nekuwedzera vimbiso dzebudiriro. Uyu ndiwo mumwe wemipiro iyo makambani ekuvaka anogona kuburitsa panguva ya2018.
Aya maitiro anoratidzwawo nekuti iwo anotenderera zvakanyanya nekuti anoenderana nemamiriro ezvehupfumi mavakanyudzwa. Naizvozvo, dzinonyanya kugadzikana kupfuura mumitengo yakasara. Nekuti vanomuka nesimba rakakura munguva dzekuwedzera, asi zvinopesana, kudzikira kwavo kunova kwakanyanya mukushomeka kwemaitiro ehupfumi. Zvirinani kuti chidimbu cheruzivo chauinacho uine huchokwadi hwakakwana usati waita chero mhando yekuita neaya anonzi maSpanish ekuvaka maitiro.
1 Kuvaka: kusimuka mune chiitiko
2 Zvimwe zvekutengesa zvivakwa
3 Chikamu chekuvaka chinogona
4 Wedzera muitiro wekutora chikwereti
5 Mamogeji ane registry shanduko
6 Mhedzisiro neAtonomous Community.
7 Iyo Euribor yakaderera
Kuvaka: kusimuka mune chiitiko
Iyo data yeiyi chikamu inoratidza iro rakakura simba iro rinoratidza regore rino. Iko, iyo misoro nemaguta makuru kwakatungamira kukura kwemitengo yeimba muSpain mu2017, iine kuwedzera kwepakati nepakati kwe7,5% mumwedzi waZvita, zvichienzaniswa ne4,5% yeavhareji yenyika, maererano nenhamba dzepamwedzi IMIE General uye Makuru Makuru, akagadzirirwa neiyo real estate kukosha uye kambani inopa mazano Tinsa.
Mushure mekuburitswa kweizvi, zvinova pachena kuti avhareji kukosha kweimba kunosara munaNovember 2013 mazinga, pamwe nekudzikira kwakaunganidzwa kwe38,6% kubva kunongedzo ya2007. Kune rimwe divi, musika wekugara wakaratidzirwa nekuwedzera zvine mwero kwemitengo muna2017 uye tinotarisira kuti muitiro uyu uenderere mberi muna2018, iine huwandu hwepasi hwekukura pa5%. . Kunyangwe paine zvicharamba zvichikosha mutsauko pakati penzvimbo, iko kudzoreredza kunowedzera kune yakawanda nzvimbo yenzvimbo.
Zvimwe zvekutengesa zvivakwa
El Maonero akanaka emusika, anokurudzirwa nezvakafanotaurwa nezvokukura kwehupfumi uye kugadzikana kwemusika wevashandi, zvichashandura kuita kuwedzera pakati pe10% ne15% mukutengeswa kwemisha, inozopfuura mazana mashanu nemakumi mashanu ezviuru. Nezve fungidziro yekutenderedza 550.000% iyo inotarisirwa kuwedzera muhuwandu hwemavisa ekuvaka matsva muna 20. Kubva pane ino mamiriro ezvinhu, inogona kunge iri nguva yakanaka yekupinda mumusika uyu kubva munzvimbo dzekuenzana. Nemabasa pamwe neshoko rekusingaperi rinoenda kune ipfupi nepakati nepakati.
Imwe yedata inotsigira iyi sarudzo ndeye yakanongedzwa kubva kuInstitute of Economic Study (IEE). Kusvika padanho rekufungidzira kuti kudyara mukuvaka muSpain kunonyoresa kuwedzera kwe4,6% muna 2018. Kana izvi zvinotarisirwa zvekukura zvikachengetedzwa, hapana mubvunzo - zvinokanganisa kubva kune ino yega yega - kuti panogona kunge pasina mubvunzo kuti kubva ikozvino pamwero wayo wekukura waizokurumidza uchienzaniswa negore rino nekuda kweiyo kusimudzira kwebasa rekugara. Zvekuti nenzira iyi inogona kuzviratidza mumitengo yemusika wemasheya inomiririra chikamu ichi zvine hunyanzvi hwehupfumi hweSpain.
Chikamu chekuvaka chinogona
Iyo yeSpain inoenderera musika ine yakafara inomiririra iyi kirasi yekuchengetedzeka. Nemakambani akadai seACS, Ferrovial, Acciona, FCC kana Inmobiliaria Colonial, pakati pezvimwe zvakakosha. Hazvishamisi kuti vamwe vevaongorori vakakosha mumisika yemari vanotenda kuti vachiri kutengesa pane imwe mitengo mumitengo yavo. Iine mukana wekudzokorora, mune dzimwe nguva, pamusoro pe10%. Iine margins mune chero eaya mamiriro ari pamusoro ayo akaunzwa nemamwe akakosha zvikamu zveSpanish equities Kwamunogona kuita kuchengetedza kunobatsira nezvivimbiso zvakakura zvekubudirira.
Kune rimwe divi, haugone kukanganwa chero nguva kuti chikamu ichi chakatemerwa hupfumi hweSpain chiri kuratidza simba rakakura panguva ino chaiyo. Iko kudzoka kune zvidhinha ichokwadi icho chiripo munharaunda yeSpanish. Kune rimwe divi, iwo hunhu hunoratidzwa nekuti hunogovana zvikamu pakati pevashandi vayo. Nekudzoka pane kuchengetedza kunogona kusvika pamatanho padyo padyo ne5%. Kuburikidza neakasiyana periodicity mukubhadhara uye izvo zvinongoerekana zvaenda kune yako yekutarisa account.
Wedzera muitiro wekutora chikwereti
Kana iwe uye haukwanise kukanganwa kuti iyo rebound mune real estate chiitiko inouya kubva kwakakura kureruka mukupa mogeji zvikwereti. Iko, maererano neazvino dhata yakapihwa neNational Institute of Statistics (INE), avhareji huwandu hwezvikwereti zvakanyoreswa mu zvinyorwa zvepfuma (kubva paruzhinji zviito zvakaitwa kare) iri 146.379 euros, 23,5% yakakwira kupfuura iwo iwo mwedzi muna 2016.
Ndichiri kune rimwe divi, uye tichigara tichitaura nezveichi chiitiko chakakurumbira, huwandu hwezvikwereti zvakagadzirwa mudzimba zviri 24.706, 8,2% kupfuura muna 2016. Mari yepakati ndeye 120.628 euros, pamwe nekuwedzera kwegore kwe9,2%. Chirevo ichi chepamutemo chinoratidzawo kuti pamitero yezvikwereti inowanikwa pane huwandu hwezvivakwa, iyo avhareji chimbadzo pakutanga iri 2,66% (13,1% yakaderera pane muna Gumiguru 2016) uye avhareji temu yemakore makumi maviri nematatu.
65,6% yezvikwereti zvemari zviri pamutengo wakasiyana wemari uye 34,4% pachiyero chakatarwa. Ivhareji yemari yemubereko pakutanga ndeye 2,41% yemitero inowirirana (19,5% yakaderera pane muna Gumiguru 2016) uye 3,36% yemitero yakatarwa (2,7% yakawanda yakakwira).
Mamogeji ane registry shanduko
Huwandu hwakazara hwezvikwereti zvine shanduko mumamiriro avo akanyoreswa mumarejista epfuma zviri 7.228, 14,7% pasi pane mumwedzi mumwecheteyo wegore rapfuura. Mune dzimba, huwandu hwezvikwereti izvo gadzirisa mamiriro avo inoderera 18,5%. Tichifunga nezve mhando yeshanduko mumamiriro ezvinhu, muna Gumiguru paive ne5.485 novations (kana kugadziridzwa kwakagadzirwa pamwe chete nesangano rezvemari), pamwe nekuderera kwegore rino kwe18,7%. Huwandu hwekushanda hunoshandura chinzvimbo (subrogations kune iye mukweretesi) chakawedzera ne2,8% uye huwandu hwezvikwereti umo muridzi weakaisa mari yaakachinja (subrogations kune ane chikwereti) yakaderera ne6,1%.
Kune rimwe divi, yeiyo 7.228 37,6 mogeji dzine shanduko mune yavo mamiriro, 17,7% inokonzerwa neshanduko yemitero yemitero. Mushure mekushandurwa kwemamiriro ezvinhu, iyo chikamu cheyakagadziriswa-reti mogeji yakawedzera kubva pa21,2% kusvika paXNUMX%, nepo iyo ye kusiyanisa kwemubereko mamogeji kwakadzikira kubva pa81,7% kusvika 78,0%. Zvese zvichiita kuti zvive nyore kune vashandisi kutenga imba yezviroto zvavo. Kusvika padanho rekumutsiridza chikamu pamatanho emakore mashoma. Iyi iX-ray iyo inopa musika wemogeji kuSpain kwemwedzi mishoma inotevera. Kutarisana nazvo netariro kana iwe uchizotora chinzvimbo mune chero ehunhu hweiyo real estate chikamu.
Mhedzisiro neAtonomous Community.
Iyo Autonomous Communities ine yakakwira kwazvo huwandu hwezvikwereti zvakagadzirwa padzimba muna Gumiguru vaive Comunidad de Madrid (5.168 4.847), Andalucía (3.998) uye Cataluña (87,0). Iyo nharaunda ine yakakwira kwazvo pegore kusiana kwemitengo iri La Rioja (XNUMX%),
Nharaunda yeMadrid (31,2%) uye Galicia (22,1%). Nharaunda dzinowanikwa mari yakawanda kubumbiro rezvikwereti mudzimba ndezveComunidad de Madrid (859,5 miriyoni euros), Catalonia (575,5 mamirioni) uye pakupedzisira Andalusia (mamirioni 492,2).
Iyo Euribor yakaderera
Imwe yemabhenefiti auinayo parizvino ndeyekuti muyero weEuropean wechikwereti chemogeji uri pane imwe yematanho akaderera mumakore apfuura. Chaicho pa -0,180%. Chinhu chinokubatsira iwe kuwana mari yekutenga imba. Hazvishamisi kuti kupihwa kwazvino mari yechikwereti kunoiswa nekupararira kunyangwe pazasi pe1%. Uye mune kumwe kukwidziridzwa ivo vanotengeswa pamwe nemamwe marongero ekushambadzira, akadai sekuregererwa kwemakomisheni uye zvimwe zvinoshandiswa mukutarisira kwavo kana kugadzirisa. Chero zvazvingaitika, ine yakanyanya kukwikwidza chiwero chemari kupfuura pakutanga.
Nenzira iyi, inguva yakakwana yekutenga chivakwa. Uye ichi ndicho chinhu chekuti pakupedzisira chinokanganisa shanduko yemakambani ekuvaka kukosha pamusika wemasheya uye izvo zvenguva izvo hazvina kubatanidzwa mukukosha kwavo kwazvino. Kuve chimwe chezvikonzero zvekuvhura zvinzvimbo pamitengo yazvino iyo zvikamu zvavo zvakanyorwa. Beyond dzimwe nzira dzehunyanzvi kana dzakakosha hunhu. Saka, saka, mukana wekutenga kana kukura kwehupfumi kuchienderera kuSpain mukati megore rino razvino. Uine dzimwe sarudzo kupfuura mune mamwe matunhu emusika wemusika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ndiyo nguva yekudyara muchikamu chekuvaka?
Ko macryptocurrency mashandiro anofanira kuve akagadziriswa
Zadzisa gwara rekutanga rako rendi